Nsọpụrụ Chineke: Olileanya nke eluigwe | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Nsọpụrụ Chineke: Olileanya nke eluigwe
di Paolo Tescione - Septemba 16, 2020
Ọnụnọ nke Chineke.Ọ bụ na ọ nọ ebe niile, a gwara m site n'echiche, obi, Okwukwe. N’ala, n’ugwu, na oke osimiri, n’ime omimi nke Atọm dịka n’eluigwe na ụwa, Ọ nọ ebe niile. Biko, gee m ntị; M kpasuru ya iwe, ọ na-ahụ m; M na-agbapụ ya, ọ na-eso m; Ọ bụrụ na mụ ezoo, Chineke gbara m gburugburu. Ọ maara ọnwụnwa m ozugbo ha wakwasịrị m, ọ na-ekwe ka nsogbu m, ọ na-enye m ihe niile m nwere, oge ọ bụla; ndu m na onwu m dabere na ya.Echiche di uto nke di egwu!
Chineke nọ n’eluigwe. Chineke bu eze elu-igwe na uwa; ma n’ebe a ọ na-eguzo dịka amaghi; anya adighi ahu Ya; N'okpuru ebe a ọ na-enweta nkwanye ùgwù ole na ole n'ihi Onye nwe ya, na ọ ga-adị ka ọ nọghị ebe ahụ. Elu-igwe, lee oche-eze nke ala-eze ya ebe ọ na-egosi ịdị ebube ya nile; ọ bụ ebe ahụ ka ọ na-agọzi ọtụtụ ụsụụ ndị mmụọ ozi nke ndị mmụọ ozi, ndị mmụọ ozi na ndị a họọrọ; ọ bụ n’ebe ahụ ka mmadụ na-ebilite n’elu Ya n’akwụsịghị akwụsị! abu ekele na ihunanya; nke ahụ bụ ebe ọ na-akpọ gị. I na-egekwa Ya nti? Yoù na-erubere ya isi?
Olileanya si n’eluigwe. Ole olile anya nke okwu ndị a nyere 'Chukwu tinyere ha n'ọnụ gị; Alaeze Chineke bụ ala nna gị, ebe njem gị. N’ebe a, anyị nwere otu mgbamchi nke nkwekọrịta ya, ngosipụta nke ìhè ya, ụfọdụ dobe nke ihe na-esi ísì ụtọ nke Eluigwe. Ọ bụrụ na ị lụọ ọgụ, ọ bụrụ na ị taa ahụhụ, ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya; Chineke nke nọ n’elu-igwe na-eche gị, dika Nna, n’aka Ya; n’ezie, ọ ga-abụ ihe nketa gị. Chukwu m, aga m enwe ike ihu gị n’eluigwe? ... Ego ole m chọrọ! Mee ka m tozuo.
OMUME. - Na-eche mgbe niile na Chineke na-ahụ gị. Guo Pater ise maka ndị na amaghị Chineke.